Burmese taste - Iora: ချစ်သူနှင့်ပတ်သက်သောအပိုင်းအစများ (၁)
Posted by Iora at 7:28 PM
မီးမီးငယ် March 7, 2014 at 8:09 AM
မအိုင်အိုရာက field ဆင်းရတယ်ဆိုတော့၊
ဘေဘီ March 7, 2014 at 1:26 PM
မြန်မြန်ဆက် ဒါမျိုးဆို စိတ်ဝင်စားတယ် အဟက် :P
အဟက်..ပရိသတ်ကြီး တစ်သိန်း တော့သေချာပြီ။း) (တစ်ယောက်ကိုပြောတာ)
San Htun March 7, 2014 at 3:55 PM
ဟုတ်သားပဲ..ကို တစ်လုံးဆို တော်ပြီပေါ့ဗျာ...နောက်အပိုင်းတွေ မျှော်နေတယ်ဗျို့ ...း)
Anonymous March 11, 2014 at 4:13 PM
အမယ်..ကြည့်စမ်း ကြည့်စမ်း..သူ က သူ့ ဖက်ကပါလား။
Ma Tint March 7, 2014 at 11:40 PM
အချိန်နဲ့တစ်ပြေးညီ ချစ်သူရှာတာကို သဘောကျတယ် အိုင်အိုရာရေ...အပိုင်းဆက်လေးမျှော်နေမယ်...
တီတင့်တို့ မောင်နှမတွေမှာလဲ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်တွေ့ရင် နှုတ်ဆက်တဲ့ စကားလေးရှိတယ် ...
'ကဲမနေနဲ့' တဲ့... အခုထိ တစ်ခါတစ်လေ ဖေ့ဘုတ်ပေါ်မှာတောင် ချော်ချော်ပြီး ပြောမိကြတယ်လေ။
အဲဒါက ဗယုတ်ကျတာ။ ချစ်သူရှာဖုို့ မတွေးသေးဘူးအဲတုန်းက။း) (ကြိုက်မဲ့သူမရှိတော့လည်းဒီလိုဘဲပြောရတာပေါ့. နော့်.း)
အုိုင်အိုရာ့အမလည်း ..ကဲ မနေနဲ့ လို့ ..ပြောတတ်တယ်။ အဟီး..
မြတ်ကြည် March 8, 2014 at 12:11 AM
မြတ်​ကြည်​လည်း အစ်​ကိုေ​တွေကို ကိုကို ဆက်​ပြီး ​ခေါ်ဖြစ်​တယ်​။ အစ်​ကို တစ်​​ယောက်​ကို ဆို ကိုကို ပိန်​​သေး လို့​ခေါ်တာ။ :D
အဖွဲ့ ဝင်တစ်ယောက်ရှိပြီ။း)
ဟန်ကြည် March 9, 2014 at 5:36 AM
ပထမဆုံးအကြိမ်ဖတ်ဖူးတဲ့ မအိုင်အိုရာရဲ့ ပင်ကိုရေးဗျို့...အရေးအသား ညက်ပါ့ဗျာ...လိုရင်းကို တိုရှင်းရေးသွားနိုင်တယ်...အဲ ကျွန်တော့်ညီမကတော့ ကိုကိုလို့ မခေါ်ပေါင်ဗျာ...ကျွန်တော်တို့ခေတ်ကျတော့ ခပ်အေးအေး သူငယ်ချင်းကလည်း အတော့်ကိုရှားတာဗျို့...အကုန် ဗရုတ်တွေချည်းပဲ...း)
အဲတုန်းက အုပ်စုတော်တော်တောင့်တယ်။ ဗရုတ်ကျလို့ ကောင်းတာပေါ့။
မဒမ်ကိုး March 17, 2014 at 7:21 PM
သဘောကျတယ်မမရေ . ရေးထားတာလေ .ကျနော်လဲ အကိုတွေကို ကိုကိုလို့ခေါ်ဖြစ်ပေမယ့် တခြားဘယ်သူ့ကိုမဆိုကိုတပ်ခေါ်တတ်တာအကျင့်ဖြစ်နေလေရဲ့ ။မမပြောသလိုပေါ့ အကူအညီတော့ရသား :P
Iora March 19, 2014 at 6:29 PM
သဘောကျတယ်ဆုိုလို့ ဝမ်းသာတယ်နော့်။း)
ဟင်းချက်ကောင်းသလို စာအရေးအသားလဲ ကောင်းလိုက်တာ
ဇာတ်လမ်းလေး အမြန်ဆက်နော် မမ.. မျှော်နေမယ်း)
Iora March 19, 2014 at 8:25 PM